Kulan loogu baroor diiqaayay Eng Canshuur oo Muqdisho lagu qabtay – Radio Muqdisho
Kulan baroor diiq ah oo ay isugu yimaadeen Xildhibaano,Sii-hayaasha xilalka Wasiirada qaar ee dowlada Soomaaliya,maamulka gobalka Banaadir,Ehelka marxuumka iyo qaar kamid ah Ururada bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo kulankaasi loogu baroor diiqaayay Allaha u naxariistee dilkii loo geystay 17 bishii November ee sanadkan Marxuum Eng Cabdulaahi Cali Canshuur oo kamid ahaa mas’uuliyiinta dowladda Hoose ee Xamar.
Ugu horeyntii kulanka ka hadlay guddoomiye ku xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka gobalka Banaadir Iimaan Nuur Iikar oo ay soo wada shaqeeyen Marxuum Cabdullaahi Cali Canshuur ayaa ayaa sheegay in Allaha u naxariistee Cabdullaahi uu ahaa nin ay ka go’an tahay wax u qabashada Ummadda Soomaaliyeed isla markaana uu ahaa nin howl kar ah shaqadiisa u jajaban.
Sii-hayaha Xilka Wasiirka Beeraha ee dowlada Soomaaliya Cabdi Axmed Maxamed Baafo ayaa hay’adaha Amniga Soomaaliya ka codsaday in ay gacanta ku soo dhigaan dambiiliyaasha ka dambeeyay dilka Cabdullaahi Cali Canshuur, isagoo sidoo kale xusay in Canshuur uu ahaa in shakhsi jecel horumarka.
Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo ah Sii-hayaha Xilka Wasiirka Garsoorka iyo Arrimaha Dastuurka ee dowlada Soomaaliya oo kulanka ka hadlay ayaa tacsi u diray Ehelada iyo guud ahaan Ummadda Soomaaliya geeridda Eng. Canshuur, waxaana uu ku baaqay in wax qabadkii Eng Cabdullaahi Cali Canshuur lagu daro taariikhda Soomaaliya.
Cali Xaamud: waa laga hortagay kooxdii soo weerartay Xalane" Dhegeyso"